China Flower Dry With Water Recovery System manufacturers and suppliers | Dryfree
Dryfree အဓိကအားဖြင့်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအခြောက်ခံစက်များ, အပူစုပ်စက်လေမှုတ်စက်စက်တွေနဲ့နေရောင်ခြည် + အပူစုပ်စက်လေမှုတ်စက်ရောင်းချပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ်: +86 769-21666979
E-mail ကို: sales@dryfree.cn
စွမ်းအင်ချွေတာသည့်နေရောင်ခြည်အပူ pump Pruit Fruit Dryer မျက်နှာပြင်
40-60kg Integrated Solar Family Dryer
ပြည်တွင်းနေရောင်ခြည်အပူ Pump ခြောက်စက် 300kg
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အပူ Pump ခြောက်စက် 800kg
သစ်သီးများအပူပိုင်းနှင့် Dehumidify စက်
ပိုမိုမြင့်မားသော Dehumidify ငါးအပူပိုင်းစက်
ရေ Recovery ကိုစနစ်နှင့်အတူပန်းပွင့်အပူပိုင်း
စက်မှုစက္ကူ Tube ဒါမှမဟုတ် Wood ကအပူပိုင်းစက်
စက်မှုရွှံ့နွံအပူပိုင်းနှင့် Dehumidify စက်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး + Backup ကိုအပူ Pump ခြောက်စက်စက်
full-အလိုအလျောက်အပူ Pump အပူပိုင်းစနစ်
CPC corp သည်နေရောင်ခြည်ပြီးတော့အပူ Pump Machine ကိုရေနွေးငွေ့-Make
အပူ Pump ခြောက်စက်
အပူ Pump အသားခြောက်စက်စက်
The dryer with water recovery system has special design to keep natural color for dried products.At same time,assuring the product quality to past lab test with green-food standard.The water recovery system can recover about 40% more or less essential oil. Advantage 1.Equipment per unit processing capacity in 600-700kg of flowers. 2.The processing time of each device is controlled within 18hours. 3.The drying temperature of the equipment should be adjusted flexible between 30degrees and 65de...
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ Download as PDF
ရေပြန်လည်နာလန်ထူမှုစနစ်နှင့်အတူလေမှုတ်စက်အစိမ်းရောင်အစားအစာ standard.The ရေပြန်လည်နာလန်ထူမှုစနစ် 40 ထက်ပို% သို့မဟုတ်လျော့နည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံနှင့် ပတ်သက်. ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူအတိတ်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုမှကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုအာမခံ, အခြောက်လှန်း products.At တစ်ချိန်တည်းသဘာဝအရောင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အထူးဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။
ပန်းပွင့်၏ 600-700kg အတွက်စွမ်းရည် processing တစ်ယူနစ် 1.Equipment ။
တစ်ဦးချင်းစီကိရိယာ၏ 2.The processing အချိန် 18hours အတွင်းထိန်းချုပ်ထားသည်။
အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများ၏ 3.The ခြောက်သွေ့အပူချိန် 30degrees နှင့် 65degrees အကြားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိန်ညှိထားရမည်ကို၎င်း, အပူချိန်တိကျစွာထိန်းချုပ်ရပါမည်။
အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများ၏ 4.The မြေတပြင်လုံးပူလေကြောင်းစောင်ရေစနစ်ကယူနီဖောင်းသောခြောက်သွေ့ပစ္စည်းကိုသေချာစေရန်သိပ္ပံနည်းကျဒီဇိုင်းနှင့်မျှမတို့သေလွန်သောသူတို့သည်ထောင့်ရှိပါတယ်ရပါမည်။
တက်ကြွအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ် 5.The ပူဓာတ်ငွေ့ condensing အရည် (ဆဲလ်အရည်) နဲ့အချိန်မီ manner.Direct အဆက်အသွယ်ထွက်သိပ်သည်းရပါမည်တစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူဗန်းအပါအဝင် 304stainless သံမဏိပစ္စည်း (၏အသုံးပြုမှုကိုလိုအပ်တယ် တစ်ဦးလွှဲပိုက်, သိုလှောင်ကန်, etc ။ ) နို့ဆီအရည်ညစ်ညမ်းကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်။
အဆိုပါ condenser များတွင်အသုံးပြုအအေးပေးရေပျံ့နှံ့နေတဲ့၏ 6.The အေးရေအပူချိန် 15degrees အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါသည်, ထိုစိုစွတ်သောဓာတ်ငွေ့ condenser ဝင်၏စိုထိုင်းဆ 50degrees အကြောင်းနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ဖြစ်လိုအပ်ပါသည်ပြီးနောက်စိုထိုင်းဆဓာတ်ငွေ့ပိုထက် 70% ခန့်စိုထိုင်းဆဖြစ်ပါသည် 40 အကြောင်းကို% အထိလျှော့ချလတ်ဆတ်တဲ့ပန်းပွင့်၏သဖြင့်ရေအထွက်နှုန်းအချိုး 40 အကြောင်းကို% ဖြစ်ပါတယ်။
(1) ပန်းပွင့်: ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့နှင်းဆီ, chrysanthemum, လာဗင်ဒါ, စံပယ်, အဖြစ်။
(2) အထူးဟင်းသီးဟင်းရွက်: ထိုသို့သောစသည်တို့နေ့ကနှင်းပန်း, ကြာရွက်, ပူစီနံအရွက်, အဖြစ်။
(3) ဟင်းသီးဟင်းရွက်: poria ကိုစ်, caulis dendrobi, ဂျင်ဆင်း, etc ။
ကွေးဂျိုးအတွက် Chrysanthemum ခြောက်သွေ့
DRYFREE Dried rose flower machine
ယခင်: CPC corp သည်နေရောင်ခြည်ပြီးတော့အပူ Pump Machine ကိုရေနွေးငွေ့-Make
နောက်တစ်ခု: ခြောက်သွေ့သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအဘို့ Air လေကြောင်းလိုင်းလေမှုတ်စက် / ငှက်ပျောချစ်ပ်လေမှုတ်စက်စက်
အချက် dehumidity ပေါင်းစည်းအပူစုပ်စက်ခြောက်သွေ့တဲ့စက်နှင့်အတူမြင့်မားသောအပူချိန်
mode ကို DF / HP က-12 / R ကို
Power ကအရင်းအမြစ်အမျိုးအစား 380V / 3N- / 50HZ
Compressor input ပါဝါ 12HP
အခိုးအငှေ့ဖွစျ လက်သတ္တုပါး Hydrophilic လူမီနီယမ်
ခဲစေခြင်း လက်သတ္တုပါး Hydrophilic လူမီနီယမ်
rated အပူ KW 36
rated လက်ရှိ တစ်ဦးက 18
အများဆုံးအပူချိန် / rated အပူချိန် ℃ 85/80
ရေခဲသေတ္တာအဆာအသံအတိုးအကျယ် ကီလိုဂရမ် 4.5 * 2
အပူချိန်အခွအေနေ ℃ -60
အရွယ် အပူစုပ်စက်အိမ်ရှင် (မီလီမီတာ) * 1400 * 1500 2500
အပူစုပ်စက်ဒုစက် (မီလီမီတာ) /
ပစ္စည်းကိရိယာအလေးချိန် ကီလိုဂရမ် 500
ဆူညံသံ DB (က) 55
အိပ်ဇောအများဆုံးအပူချိန် ℃ 115
အိပ်ဇောဘက်ဖိအား MPA ≦ 2,35
backpressure MPA ≧ 0.05
Axial စီးဆင်းမှုပန်ကာ Power က (KW) 0.75 * 1 / * 1 1.1
specification 380V / 3N- / F500
Air ကိုအသံအတိုးအကျယ် (M3) 10000-15000
လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကာကွယ်မှုအမျိုးအစား အိုင်ပီ * 4
ကြေးဝါနှင့်ပူးတွဲ၏ Size ကို /
စံဆက်စပ်ပစ္စည်း ညွှန်ကြားချက် / အာမခံကဒ် / လက်မှတ်
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများက featured မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အပူစုပ်စက်ထုတ်ကုန် 1.Providing နှင့်သီးသန့်နည်းပညာဦးဆောင်။
နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် system ကိုထောက်ပံ့ပြီးပြည့်စုံသောနည်းပညာဆိုင်ရာ 2.Building ။
ပုံမှန်ပြန်လာခရီးစဉ်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ် 3.Supporting ။
client များနှင့်အတူကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းသေချာစေရန်ဝန်ဆောင်မှု tracing အထူး-တာဝန်ပေးအပ်သူတစ်ဦး 4.Providing ။
1 နှစ်အခမဲ့ထုတ်ကုန်အာမခံကာလထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အပိုပစ္စည်းများသက်ဆိုင်ရာမှ 5.Committing ။
6.Gradually ထုတ်ကုန်, နည်းပညာနှင့်ဖြေရှင်းချက်သုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အဆင့်မြှင့်။
Dryfree အမြဲသင်တို့သည်ငါတို့၏ဝန်ဆောင်မှုပေးဘို့ပြင်ဆင်ရောက်လာပါတယ်။ သငျသညျအချိန်မီကိုထောက်ပံ့သည့် fittings နှင့်အတူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အချိန်မီထုတ်လုပ်မှု recover နိုင်အောင်ကျနော်တို့ 24 နာရီနေ့အဘို့သင်သည်အားလပ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့။ ကျနော်တို့စီမံကိန်းတွင်ကောင်းစွာ-ကြုံတွေ့နေကြသည်ငါတို့သည်လည်းအပြီး-ရောင်းချ service.We နှင့်အတူအကူအညီမှကွဲပြားခြားနားသောဒေသတွင်း၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဂျင့်နှင့်မိတ်ဖက်မေးနိုငျလက်ရှိ day.And အပေါ် Dongguan ၌အကြှနျုပျတို့၏ဂိုဒေါင်ထဲကနေအပြီး-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အများအားအသုံးပြု fittings ကယ်မနှုတ်နိုင်နှင့် client များသဖြင့်ချီးကျူးလိုက်သည်။
အဆိုပါအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့, အချိန်မီနှင့်တာဝန်ရှိပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု Dryfree အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အလေးမွတျ Modes သာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Dryfree, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူစျေးကွက်ဝယ်လိုအားပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုနေပါစေသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Dryfree ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာများသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဘို့မြဲနျဖိုးထားအာမခံချက်ပေးလိမ့်မယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Now ကို
Wangyeda Technopark, Dongguan မြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်။
Link & ကြေညာချက်
These four factors determine the process of the...12-01-21
How to prevent honeysuckle from turning black a...14-10-20
Cherry dryer process introduction12-10-20
How does the heat pump drying room dehumidify?09-10-20
Introduction of dried pineapple drying process29-09-20
© Copyright - 2010-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။
လမ်းညွှန် - Featured ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
နှင်းဆီခြောက်စက် , နှင်းဆီရေဓါတ်ခန်းခြောက်မီးဖို , နှင်းဆီအပူပိုင်းစက် , နှင်းဆီရေ Recovery ကိုပစ္စည်း , Chrysanthemum ခြောက်စက်စက် , ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်အခြောက်ခံစက် ,